NISA oo shaacisay in Harun Macruuf uu leeyahay xiriiro khatar ku ah Amniga Qaranka | allsanaag
Hey’adda Sirdoonka iyo Nabadsugida Qaranka ayaa shaaca ka qaaday inay tallaabo sharciga ku haboon ka qaadeyso wariyaha caanka ah Harun Macruuf oo ka tirsan Laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Qoraal goor dhow la soo dhigay barta Twitter-ka ee NISA ayaa lagu sheegay in Harun Macruuf uu leeyahay xiriiro khatar ku ah Amniga Qaranka, inkastoo aan la carbaabin xiriiradaas cida uu la leeyahay.
“NISA waxay talaabada sharciga ah ee ku haboon ku qaadaysaa Harun Macruf, oo leh xiriiro khatar ku ah amniga Qaranka, kuna kacay falal ka baxsan anshaxa warbaahinta. Waxaan hay’adaha dalka la wadaagaynaa iney ka feejignaadaan xiriirkiisa, soona wargaliyaan laamaha amniga Qaranka”ayaa lagu yiri qoraalka Hey’adda NISA.
Arrintan ayaa ah mid lama filaan ah in Hey’adda Nabadsugida Qaranka si toos ah wariye caan ah ku eedeyso in Amniga qaranka khatar ku yahay, iyadoo Hey’adda looga fadhiyo inay soo bandhigto caddeymo dheeraad ah oo ku aaddan eedeyntan.
Wariye Harun Macruf ayaa ah wariye baarre ah oo aad ugu xeel dheer inuu xogo lagu kalsoonaan karo ka helo gudaha Al-Shabaab, iyadoo aad loogu ammaanay buuggiisa uu ka qoray Arrimaha Al-Shabaab ee la magac baxay “Inside Al-Shabaab”.
← Ciidan Tababar Loogu Soo xiray Qardho Dagaalka Jubbland →